इन्टरनेटमा यी सेलिब्रेटी ‘खतरनाक’ | Filmy Bahar
इन्टरनेटमा यी सेलिब्रेटी ‘खतरनाक’
मुम्बई(एजेन्सी) । इन्टरनेटले सारा विश्वलाई एउटा गाउँ जस्तै बनाइदिएको छ । जहाँ कोही जुनसुकै समयमा जोसुकैसँग कुरा गर्न सक्छ । केही कुराबारे खोजी गर्दा उसले ती कुराहरु तुरुन्तै पाउन सक्छ । तर अब यो काम गर्नु इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि महंगो साबित हुने भएको छ । एक रिपोर्टका अनुसार केही सेलिब्रेटीलाई इन्टरनेटमा खोज्नु तपाईंका लागि समस्या निम्तने हुनसक्छ । यो सूची अमेरिकाको साइबर सेक्युरिटी कम्पनी म्याकाफीले जारी गरेको हो ।
अमेरिकाको साइबर सेक्युरिटी कम्पनी म्याकाफीले सर्वाधिक खतरनाक सेलिब्रेटीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो लिष्टमा कैयौं सेलिब्रेटी छन्, त्यसमा १० भारतीय पनि छन् । यी सेलिब्रेटीलाई इन्टरनेटमा सर्च गर्नु अब घातक हुनेछ । यो सूचीमा पहिलो नम्बरमा फूटबलर क्रिष्टियानो रोनाल्डो छन् भने दोस्रो नम्बरमा भारतीय अभिनेत्री तब्बु छिन् । यसको अर्थ यो हो कि अब इन्टरनेटमा तब्बुको बारे खोज्नु खतरनाक हुनेछ । किनकी यस्तो काम गर्दा तपाईं जानी नजानी त्यो साइटमा पुग्नुहुनेछ, जहाँ तपाईं जानु हुँदैन थियो ।
सूचीको तेस्रो नम्बरमा तापसी पन्नु छिन् । तापसीले फिल्ममा जति लोकप्रियता कमाएकी छन्, त्यो लोकप्रियताका आधारमा उनलाई फ्यानले इन्टरनेटमा खोज्ने गरेका छन् । तर अब उनको नाम सूचीमा आएको छ । त्यसकारण उनलाई इन्टरनेटमा खोज्नु अब केही घातक हुनेछ । चौथो नम्बरमा अनुष्का शर्मा छिन् । अनुष्काको पनि करोडौं फ्यान छन् र उनलाई इन्टरनेटमा निकै खोजिन्छ । जब उनी आमा बन्न लागेकी छन्, उनका बारेमा जान्न धेरै उत्सुक छन् । तर अब इन्टरनेटमा उनीबारे जान्न खोज्नु तपाईंको लागि घातक हुनसक्छ ।
पाँचौं नम्बरमा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा छिन्, जसको फ्यान फलोइङ निकै धेरै छ । उनलाई पनि इन्टरनेटमा धेरैपटक सर्च गरिन्छ । त्यस्तै सातौं नम्बरमा सारा अली खान छिन् । लागु औषधमा नाम जोडिएपछि इन्टरनेटमा उनको नाम खोज्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर अब उनको नाम खोज्नु पनि खतरनाक नै हुनेछ ।
सलोनको दुलही बनिन् स्मिता !
बाँसैको चोयालेमा नीर र रुबिनाको मायाप्रिती
कुली नम्बर १ मा पाँच वरुण
आमिरलाई अदालतबाट राहत !
ऋतिकको वार २ मा सलमान र शाहरुख
गर्भवती अवस्थामै सुटिङमा अभिनेत्रीको व्यस्तता
टेलिभिजन अभिनेत्री लीनाको निधन
ताराको पछ्यौरीमा अल्झिए निराजन र सुशिला
नेपाल र अष्ट्रेलियामा हेरिटेज अफ फेसन नेपाल
गोविन्द र स्मृतिको दोहोरीमा अनु र परमेश्वर
प्रमोदको वियोगान्त यो माया के हो
नवीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेसन पुरस्कार